Jarmalka iyo Israa’iil oo isku maandhaafay arrimaha iiraan iyo Falastiin | Star FM
Home Caalamka Jarmalka iyo Israa’iil oo isku maandhaafay arrimaha iiraan iyo Falastiin
Jarmalka iyo Israa’iil oo isku maandhaafay arrimaha iiraan iyo Falastiin
Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo ra’iisul wasaaraha Israa’iil Naftali Bennett ayaa lagu soo warramayaa in aynan isku fahmin siyaasadda lagula macaamilaya dalalka Iiraan iyo Falastiin.
Merkel ayaa safarkii ugu dambeeyay oo rasmi ah ku tagtay Israa’iil.
Hasa ahaate iyada iyo Bennet wax heshiis ah kama aynan gaarin ka falcelinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan iyo in la soo dhiso dowlad awood leh oo Falastiin oo aynan Israa’iil faragelin ku hayn.
Waxay hoggaamiyaha Jarmalka sheegtay inay aaminsan yihiin in colaadda tobaneeyo sano jirtay lagu xallin karo keliya hadii Israa’iil iyo Falastiin loo arko labo dowladood oo si isku mid ah u madax bannaan.
Previous articleDHAGEYSO:Kalonzo Musyoka oo dhaliilay hadal ka soo yeeray Ruto
Next articleIn ka badan 6 qof oo lagu dilay qarax ka dhacay Yemen